ကားလောကမှာ Gasket ပျက်တာ၊ Gasket ပျက်လို့ Head ဖွင့်ရတာ၊ အင်ဂျင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတာအစရှိတဲ့ Gasket ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့ တော်တော်များများကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီနေ့တော့ ကားအင်ဂျင်ကိုကြီးကြီးမားမားဒုက္ခပေးနိုင်၊ ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ Engine Head Gasket လေးအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
Engine Head Gasket ဆိုတာ?
ကျနော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Internal Combustion Engine (အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးမှ စွမ်းအင်ရတဲ့အင်ဂျင်) တွေအတွက် မရှိမဖြစ်၊ မပါမဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ Engine Head Gasket (ဂက်စ်စကက်) ကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ပါ။ Head Gasket က Engine Head နဲ့ Cylinder Block ကြားထဲမှာ ကြားခံနယ်တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိပါတယ်။ Head Gasket ကို Multi Layer Steel (MLS) လို့ခေါ်တဲ့ စတီးပြားကို အထပ်ထပ်ပုံစံပြုလုပ်ထားတဲ့ ပုံစံတွေ၊ Copper (ကြေးနီ) နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံ၊ Composite လို့ခေါ်တဲ့ ခဲတို့၊ ကျောက်ဂွမ်းတို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ရောနှောထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံ အစရှိသည်ဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။
Engine Head Gasket တွေက Engine Head နဲ့ Cylinder Block ကြားထဲမှာ Seal တစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိနေတာပြီး သူရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာက Engine အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဖြစ်တဲ့ Intake ၊ Compression ၊ Power နဲ့ Exhaust စတဲ့4Strokes တွေကြားထဲမှာ Power တွေ ယိုစိမ့်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် Engine Head နဲ့ Cylinder Block ကြားထဲမှာ Gasket ထည့်သွင်းထားရတာလဲဆိုရင်တော့ Engine Head နဲ့ Cylinder Block တွေဟာ သတ္တု ဒါမှမဟုတ် သံ တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာမို့ မျက်နှာပြင် မညီညွတ် မချောမွေ့မှုတွေ၊ သတ္တုနဲ့ သံထည်တို့ရဲ့ အဆွဲအကျုံ့စတဲ့ သဘောတရားတွေကြောင့် Engine Head နဲ့ Cylinder Block ကြားထဲ Power Loss ဖြစ်မှာကို ကာကွယ်ဖို့အနေနဲ့ Head Gasket ကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားရတာပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ Engine Head Gasket ကို မြင်ဖူးတဲ့သူတွေဆို သိကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Gasket မှာ အပေါက်ကြီး အပေါက်သေးစတဲ့ အပေါက်လေးတွေပါပါတယ်။ အဲဒါတွေက ဘာတွေလုပ်တာလဲဆိုရင်တော့ အင်ဂျင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ ရေ (Coolant) တွေကို Combustion Chamber ဆိုတဲ့ မီးလောင်ခန်းထဲ မဝင်အောင်ရယ်၊ နောက် အင်ဂျင်ဝိုင် ဆီလိုင်းတွေနဲ့ ရေ (Coolant) လိုင်းတွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမရောနှောအောင်၊ သီးသန့်စီ သွားလာနိုင်အောင် တားဆီးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခြုံငုံပြောရရင်တော့ Engine Head Gasket ဆိုတာ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ဆီတွေရယ်၊ အအေးပေးစနစ်က ရေလမ်းကြောင်းတွေရယ်ကို မရောနှောစေဘဲ သူဟာနဲ့သူလည်ပတ်နေအောင် ကြားခံအတားအဆီးအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ကောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆီ၊ ရေ၊ လေ၊ ဝိုင် အစရှိတဲ့ အင်ဂျင်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို အမြဲသတိပြုပြီး ထိန်းသိမ်းတဲ့ ကားပိုင်ရှင်လက်ထဲမှာ Engine Gasket တွေဟာ Engine သက်တမ်းကုန်သည်အထိ၊ အင်ဂျင်ကျသည်အထိလောက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းတာ၊ အင်ဂျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဒိုင်ခွက်ထဲက အချက်ပြ Warning Signs တွေ Indicators တွေကို မလေ့လာထားဘဲ ကားထိုးရပ်သည်အထိ မောင်းနှင်တာတွေကြောင့် Engine Head Gasket ပျက်စီးပြီး အင်ဂျင်တစ်ခုလုံးပြုပြင်လိုက်ရတာမျိုးတွေလည်း ကားလောကမှ မကြာခဏတွေ့မြင်နေရပါတယ်။
Engine Head Gasket ပျက်/မပျက်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
Engine Head Gasket က အပေါ်မှာ ပြောထားသလို Engine Head နဲ့ Cylinder Block ကြားထဲမှာရှိတာမို့ Engine Head Gasket ပျက်/မပျက်ကို မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တာကြောင့် Gasket ချို့ယွင်းမှုတွေကို ခန့်မှန်းဖို့ခက်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ Engine Head Gasket ပျက်သွားရင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အင်ဂျင်အခြေအနေတွေ သိမယ်ဆိုရင်တော့ Engine Head Gasket ပျက်/မပျက် သေချာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ် ။
Engine Head Gasket ပျက်သွားရင် ….
ရေတိုင်ကီ (Radiator) ထဲမှာ ပူစည်ဖောင်းလေးတွေထတာ
Engine Head Gasket ပျက်ရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုက ရေတိုင်ကီထဲမှာ ရေပူစည်ဖောင်းလေးတွေ ထလာတာပါ။ ကားအင်ဂျင်ပုံမှန် စစနှိုးချိန်မှာ ရေတိုင်ကီအဖုံးကိုဖွင့်ထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် Coolant ထဲမှာ ရေပူစည်ဖောင်းလေးတွေ ထနေတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Cooling System ထဲက ရေတွေလည်ပတ်နေတဲ့အထဲမှာ ခိုအောင်းနေတဲ့လေတွေထွက်လာတဲ့သဘောပါ။ ဒါကခဏပါပဲ။ အင်ဂျင်ပူလာတဲ့အချိန် ဒီပူစည်ဖောင်းလေးတွေ တဖြည်းဖြည်းလျော့သွားရပါမယ်။ အဲ အင်ဂျင်ပူလာတဲ့အချိန်ထိမလျော့သွားဘဲ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် ပူစည်ဖောင်းတက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါ Head Gasket ပျက်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာပါ။ ဖြစ်ပုံက Combustion Chamber ဆိုတဲ့မီးလောင်ခန်းထဲက Compression လုပ်ခံရတဲ့လေတွေဟာ Head Gasket ပျက်နေတဲ့ နေရကြိုကြားလေးတွေကနေ Coolant လိုင်းတွေထဲရောက်ပြီး လေပူစည်ဖောင်းတွေအဖြစ် ရေတိုင်ကီထဲလာပေါ်တာပါ။ ဒါကြောင့် ရေတိုင်ကီထဲလေပူစည်ဖောင်းတွေ ဆက်တိုက်ထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဝါရင့် ဝပ်ရှော့ဆရာကြီးတွေက အဲဒါ Head Gasket ပျက်ပြီလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
အိတ်ဇောပိုက်ကနေ မီးခိုးဖြူတွေ တောက်လျှောက်ထွက်တာမျိုးကလည်း Head Gasket ပျက်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာပါပဲ။ ဒီလိုမီးခိုးဖြူတွေထွက်ရတာကတော့ Head Gasket အတွင်းပိုင်းပျက်သွားရင်ဖြစ်တတ်ပြီး Combustion Chamber ထဲကို Coolant တွေဝင်ရောက်မီးလောင်ကျွမ်းတာကနေ မီးခိုးဖြူတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားတာပါ။ အင်ဂျင် Heat တက်ဖူးပြီး ရေတိုင်ကီထဲက Coolant တွေပျောက်၊ Coolant တွေထပ်ထည့်လည်း လျော့လျော့သွားပြီး အိတ်ဇောကနေ မီးခိုးဖြူတွေထွက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါ Engine Head Gasket ပျက်တာကျိန်းသေပါပြီခင်ဗျာ။
ရေတိုင်ကီထဲက ရေတွေ Pressure ကျတာ
ရေတိုင်ကီထဲက Coolant တွေက အင်ဂျင်လည်ပတ်ပြီး မကြာခင်ပူနွေးလာပြီး အင်ဂျင်နဲ့ ရေတိုင်ကီအတွင်းထဲမှာ Pressure တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုရင်တော့ Coolant တွေ Boiling Point လို့ခေါ်တဲ့ ရေဆူမှတ်တိုးလာအောင်ပါ။ Pressure မရှိတဲ့ရေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် Pressurized လုပ်ထားတဲ့၊ ဖိအားတစ်ခုအပေးခံထားရတဲ့ ရေက တော်ရုံနဲ့မဆူမပွက်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် အင်ဂျင်ပူပြီးခဏတာအချိန်အတွင်း ရေတိုင်ကီထဲက Coolant တွေကို ဖိအားတစ်ခုဖြစ်အောင် လုပ်ထားရတာပါ။ Engine Head Gasket ပျက်ပြီဆိုရင် အပေါ်မှာပြောထားသလိုပဲ Coolant လမ်းကြောင်းထဲကရေတွေက Combustion Chamber ထဲကို ယိုစိမ့်ထွက်ကုန်တာကြောင့် ရေတိုင်ကီထဲက Coolant တွေက ဖိအားလျော့ကျပြီး မြန်မြန်ဆူကုန်ပါတော့တယ် ။ ဒါကလည်း Engine Head Gasket ပျက်ရင်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။
Engine Oil နဲ့ Coolant ရောကုန်တာ
ရေတိုင်ကီအဖုံးဖွင့်လိုက်တယ်ဆို Coolant တွေထဲမှာ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေ တွေ့ရတာ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ဂိတ်တံဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါ အင်ဂျင်ဝိုင်အရောင်မဟုတ်တော့ဘဲ ပန်းနုရောင်ဖျော့ဖျော့ ဒါမှမဟုတ် ဖြူတူတူအရောင်တွေဖြစ်ကုန်တာမြင်ရင်တော့ အဲဒါ Gasket ကြိမ်းသေပျက်ပြီလို့ သိရမှာပါ။ Gasket မှာ အင်ဂျင်ဝိုင်သွားမယ့် လမ်းကြောင်းအပေါက်ကလေးတွေရယ်၊ ရေ (Coolant) သွားမယ့် လမ်းကြောင်းအပေါက်ကလေးတွေရှိပြီး အဲဒီအပေါက်လေးတွေကြားက ကြားခံနယ်လိုင်းတွေပေါက်သွားရင် အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ရေရောသွားတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ရေထဲ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေရောသွားတာမျိုးကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Engine Cylinder Compression မရှိတော့တာ
တချို့ကားလေးတွေ Heat အရမ်းတက်ပြီး ပြန်နိုးလို့မရတော့တာမျိုးဆိုရင် အဲဒါ Head Gasket ပျက်သွားလို့ပါ။ အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလို Head Gasket က Engine Head နဲ့ Cylinder Block ကြားထဲမှာတည်ရှိပြီး Seal အဖြစ်ဆောက်ရွက်ပေးပါတယ်။ ဘာအတွက် Seal ဖြစ်စေတာလဲဆိုရင်တော့ ဆီနဲ့လေနဲ့ အရောအနှောကို မီးလောင်ဖောက်ခွဲဖို့ ဖိသိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ ဖိအားဖြစ်စေဖို့နဲ့ အဲဒီဖိအားတွေ မီးလောင်ခန်းအပြင်ကိုထွက်မသွားစေဖို့ Head Gasket ကနေ Seal အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရတဲ့ Head Gasket ပျက်သွားပြီဆိုရင် အဲဒီဖိအားတွေက ပျက်တောက်နေတဲ့နေရာတွေကနေ အပြင်ကိုထွက်ကုန်ပါတယ်။ အဲဒီလိုထွက်ကုန်တဲ့အတွက် မီးလောင်ခန်းအတွင်းမှာ လိုအပ်တဲ့ဖိအားမရှိတော့ဘဲ အင်ဂျင်စက်နှိုးမရတာမျိုးဖြစ်ကုန်တာပါ။ အဲဒါမျိုးကိုတော့ ပြင်ပကားဝပ်ရှော့လောကမှာ Gasket မီးလိုင်းပျက်တယ်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
Engine မီးလောင်ခန်းထဲ ရေဝင်တာ
အင်ဂျင်မီးလောင်ခန်းထဲ ရေတွေဝင်ပြီးအင်ဂျင်နှိုးရခက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် အင်ဂျင်လုံးဝနှိုးမရတာတွေကလည်း Engine Head Gasket ပျက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်မီးလောင်ခန်းက မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ပေါ်စေဖို့၊ ခြောက်သွေ့နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ Engine Head Gasket ပျက်ပြီး အင်ဂျင်မီးလောင်ခန်းထဲ Coolant တွေရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အင်ဂျင်နိုးရခက်တာ၊ အင်ဂျင်လုံးဝနှိုးမရတာစတဲ့ ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Engine Heat တက်တာ
Heat တက်လို့ Gasket ပျက်တာ၊ Gasket ပျက်လို့ Heat တက်တာကလည်း အပြန်အလှန်မိတ်ဖက်တွေပါ။ Engine Head Gasket ပျက်တဲ့အခါ အင်ဂျင်မီးလောင်ခန်းထဲက မီးလောင်ပြီးသား Exhaust အခိုးငွေ့ပူတွေက Coolant တွေထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး Coolant တွေကို မြန်မြန်ပူစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Cooling System ရဲ့ Coolant လည်ပတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲမှာ Exhaust အခိုးငွေ့တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့် Cooling System ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး Engine Heat မြန်မြန်တက်စေပါတယ်။ Engine Heat တက်တာကလည်း Engine Head Gasket ပျက်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာ။
Engine Head Gasket မပျက်အောင် ဘာတွေ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသင့်သလဲ?
Engine Head Gasket ပျက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲကအဖြစ်များဆုံးကတော့ အင်ဂျင် Heat တက်တာပါ။ အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ်မှာရှိတဲ့ Fan Motor ၊ Water Pump ၊ Radiator ၊ Coolant ၊ Thermostat အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေချို့ယွင်းတာကိုသတိမပြုမိဘဲ မောင်းနှင်မိတာကြောင့် Heat တက် Gasket ပျက်တာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားမောင်းတယ်ဆို အရင်ဆုံး ဆီ၊ ရေ၊ လေ၊ ဝိုင် သတိထားရမှာဖြစ်သလို ကားဒိုင်ခွက်ထဲက အင်ဂျင်ဝိုင်မီး လင်းလာသလား၊ Heat Gauge ပုံမှန်ရှိရဲ့လားဆိုတာ အမြဲသတိထားပြီးမောင်းနှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက် Gasket ပျက်စေတဲ့အကြောင်းက Combustion Chamber နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ Pistons တွေထိပ်မှာ ကာဗွန်ဂျိုးများပြီး မီးသံခေါက်တာမျိုးတွေကြောင့် Head Gasket နာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အင်ဂျင် Overhaul (အင်ဂျင်ကိုင်တာ) လုပ်တဲ့အချိန် Head Bolt တွေဆွဲတဲ့အခါမျိုးမှာ လိုအပ်တဲ့ Bolt Nut Tight တဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေ မမီတာတွေကြောင့်လည်း Gasket ပျက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အားလုံးကိုခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင် Head Gasket ပျက်တယ်ဆိုတာ အင်ဂျင်တစ်လုံးပျက်စီးဖို့အတွက် လမ်းစဖြစ်လို့ အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကားတွေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Gasket ပျက်တယ်လို့ယူဆနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခုဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးသုံးမျိုးစုပေါင်းပြီးဖြစ်စေ တွေ့တယ်ဆိုရင် ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့တွေမှာပြသပြီး Engine Head Gasket ပျက်တာ ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Head Gasket ပျက်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ တွေ့ရဲ့သားနဲ့ အလျင်အမြန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေမလုပ်တာကြောင့် အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ရေရောပြီး အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးတာ၊ Bearing တွေဖမ်းတာ၊ အရည်ပျော်သွားတာတွေဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်တစ်ခုလုံးလဲလှယ်ရတာမျိုးတွေထိ ကြုံတွေရဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ကားလေးတွေရဲ့ Engine ကျန်းမာရေးအတွက် Engine Head Gasket ပျက်ရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာလေးတွေကို သတိထားဆင်ခြင်နိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။